गनगन टिमसँग गरिएको बिशेष कुराकानी (भिडियो सहित) - Naya Aawaj
गनगन टिमसँग गरिएको बिशेष कुराकानी (भिडियो सहित)
by नयाँ आवाज
२ भाद्र २०७७
भाद्र २, काठमाडौं /पछिल्लो समयमा टिकटकमा भाइरल हुन सफल दोहोरी गित ओए गनगनले सोचेभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको छ ।
निकै मार्मित शब्दहरु समाबेश गरेर तयार गरिएको यस गितको म्यूजिक भिडियो भने केही दिन अघि मात्रै सार्बजनिक भएको हो । नेपाली सामाजको टिपिकल शब्दहरुको प्रयोग गरी तयार गरिएको यस गनगन गितको स्टुडियो भर्सनमा पुरुषको र महिलाको तिनतिन अन्तरा बजारमा आएको थियो ।
स्टुडियो भर्सनलाई यू ट्युबमा धेरैले मन पराए पछि यस गितको भिडियोको छायाँकन गरिएको गनगन टिमले बताए । पछिल्लो समयमा बजारमा आएका अन्य लोक दोहोरी गित भन्दा केही फरक र सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको यस गितमा संगम थापा र प्रतिमा अर्यालको आवाज रहेको छ भने यस गितलाई मिलन फिल्मस्ले बजार ब्यबस्थापन गरेको छ ।
मिलन फिल्मस्ले बजारमा ल्याएको यस गितको शब्द सानु के.सी. ले तयार गरेका हुन भने भिडियोको परिकल्पनाकार दिनेश श्रेष्ठ रहेका छन् । भिडियोमा अनुपराजुली, मुकुन्द थापा, करुणा पाण्डे, सुदर्शन खतिवडा लगायतको अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई केहि फिल्मी शैलीमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको भिडियोका परिकल्पनाकार श्रेष्ठले बताए ।
भिडियो हेर्न तलको लिंक खोल्नु होला ।
कोरोनाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धक्का
कक्षा १२ को नतिजा माघ १० भित्र
अस्पताल छैन, ११ तले भ्यु टावर !
राजतन्त्रकाे अपमान गरेको भन्दै थाईल्यान्डमा एक महिलालाई सजाय
५ सय रुपैयाँले बढ्यो सुन
झापामा टिपरको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु
चाँदीका गहना र सुनसहित दुई जना पक्राउ